भागीरथी लाई एकतर्फी रुपमा मन पराएका दिनेशले, तर कहिल्यै भन्न सकेनन् ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भागीरथी लाई एकतर्फी रुपमा मन पराएका दिनेशले, तर कहिल्यै भन्न सकेनन् !
बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको घटनामा संलग्न भन्दै प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भागरथी भट्टकै छिमेकी बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ का एक युवा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
‘भागरथी घटनामा एक अभियुक्त पक्राउ परिसकेका छन्, ती अभियुक्त नै भागरथीकोघटनामा संलग्न छन्,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले भने, ‘हामी आज पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त सार्वजनिक गर्दैछौं।’
एक सातालामो प्रहरी अनुसन्धानपछि प्रहरीले भट्टको ज्या’न लि’एको आ’रोपमा दिनेशलाई सार्वजनिक गर्न लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदीले जानकारी दिएका हुन ।
सनातन धर्म माविमाको कक्षा १२ मा पढ्ने भागरथीलाई दिनेशले लामो समयदेखि एकतर्फी रुपमा मन पराएको र १५ दिनअघि स्कुलबाट एक्लै फर्किएको यो घटना घटाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
प्रहरी स्रोतकाअनुसार उनले भागरथीको ‘ज्यान लि’ने एकल यो’जनामा आफू पहिल्यैदेखि रहेको उल्लेख गर्दै उचित मौकाको पर्खाइमा बसेको समेत भनेका छन्।
पक्राउ परेका किशोर उनको न्याय माग्दै हुने प्रर्दशनमा समेत दैनिकजसो सहभागी हुने गरेको खुलेको छ। सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमै अध्ययनरत उनी भागरथीको न्यायका लागि स्थानीय खोचलेक बजारसहितका ठाउँमा गरिने प्रर्दशनमा उनी सहभागी हुने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका—७ बगौराका भानदेव भट्ट यसैपालि भागरथी पढ्ने विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएका हुन्। उनको घरबाट १५ मिनेट जति हिँडेपछि भागरथीकै घर हुँदै उनी विद्यालय पुग्छन्।
नेपालमा तीन जनामा ओमिक्रोन भेरियन्टको पुष्टि
आर्यन खानको जमानत फेरि अस्वीकार, अब जेलमै बस्नुपर्ने